ရန်းနစ်ဂ်ဆိုတာ ဘယ်သူကြီးတုန်း၊ သူက ဖလားရောရဖူးလို့လားလို့ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာထမေးခဲ့တဲ့ အီဗရာ | Duwun
ရန်းနစ်ဂ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အီဗရာက စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်နေတာပါ။
ယူနိုက်တက်နောက်ခံလူဟောင်း အီဗရာကတော့ ယူနိုက်တက်တို့ ခန့်အပ်ထားတဲ့ နည်းပြသစ် ရန်းနစ်ဂ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်နေပြီး မေးခွန်းထုတ် ဝေဖန်မှုတွေ ပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ရန်းနစ်ဂ်ဟာ မနေ့က အာဆင်နယ်ကို ၃-၂ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲမှာ အိုးထရက်ဖို့ဒ်ကွင်းအတွင်း လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ဒီနေ့မှာတော့ အသင်းနည်းပြသစ်အဖြစ် တရားဝင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါပြီ။
ဂျာမန်လူမျိုးနည်းပြ ရန်းနစ်ဂ်ဟာ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့ ယူနိုက်တက်ကို အသက်သွင်းဖို့ရှိနေပြီး ဒီအပေါ်မှာတော့ အီဗရာက ယူနိုက်တက်မှာ ကိုယ်ပိုင် DNA ရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့် ရန်းနစ်ဂ်ရဲ့ ကစားဟန်ကို အခြေခံဖို့ လိုအပ်သေးတာလားဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ် ဝေဖန်ခဲ့တာပါ။ အာဆင်နယ်ကို အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာ အီဗရာက “ကျနော်ကတော့ သဘောမတူနိုင်ပါဘူး”
“ယူနိုက်တက်မှာ ကိုယ်ပိုင် DNA နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကစားဟန်ရှိပြီးသားလေ။ အခု ကျနော်တို့က ရန်းနစ်ဂ်ရဲ့ ကစားပုံအတိုင်း လိုက်ပြောင်းလဲပေးရမှာလား? ယူနိုက်တက်က နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် သူတို့ ပုံစံအတိုင်း ကစားခဲ့တာပါ။ အခု ဒီလူက ယူနိုက်တက်ရဲ့ ကစားပုံကို ပြောင်းလဲမှာပေါ့။ ကျနော်ကတော့ စိတ်ပျက်တယ်ဗျာ”
“ရန်းနစ်ဂ်ဆိုတာ ဘယ်သူတုန်း? သူက နည်းပြတယောက်အနေနဲ့ ဆုဖလားတွေ အများကြီးရဖူးလို့လား? ကျနော့်အတွက် သူက အားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်သင့်တယ်လို့ ခံစားမိပြီး အကယ်ဒမီမှာ ကလေးတွေကို နည်းပြခိုင်းသင့်ပါတယ်”
“ဒါပေမယ့် စားဖိုမှူးတယောက်က ယူနိုက်တက်ရဲ့နောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင် ကျနော်လည်း အဲ့ဒီစားဖိုမှူးဘက်က ရပ်တည်မှာပါ။။ ဒီတော့ အခုလည်း ကျနော် ရန်းနစ်ဂ်ကို အားပေးထောက်ခံပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားအနေနဲ့ ယူနိုက်တက်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို လေးစားသင့်တယ်လို့တော့ ကျနော်ထင်တယ်နော်” ဆိုပြီး ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ရခ